हेर्नुस २०७६ पौष ०४ गते शुक्रबारको राशिफल – सजल सन्देश
हेर्नुस २०७६ पौष ०४ गते शुक्रबारको राशिफल
By Sajal sandesh	 On३ पुष २०७६, बिहीबार १२:५१
२०७६ पौष ०४ गते शुक्रबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
तपाईंको दिन शुभ रहाेस् ।
स्कुले विद्यार्थीहरुलाई ‘क्रिसमसको टोपी’ लगाउन बाध्य पारिए प्रतिकार गर्ने हिन्दू धार्मिक संघ–संस्थाहरुको चेतावनी